Komishanka oo Cayimay Maalinta Qabashada Doorashada Madaxtooyada 29.03.2009 | WWW.SOMALILAND.NO
Komishanka oo Cayimay Maalinta Qabashada Doorashada Madaxtooyada 29.03.2009
Posted on Luulyo 9, 2008 by Weriye2
Hargeysa 09.07.08, Komishanka Doorashooyinka, ayaa si rasmi ah u cayimay maalinta ay u qoondeeyeen inay dalka ka dhacdo doorashada Madaxtooyada Somaliland. Guddiga Doorashooyinka ayaa kulan ay shalay xarunta Akademiga iyo Nabadda ee magaalada Hargeysa kula yeesheen xubno ka kala socday saddexda xisbi qaran waxay kaga dhawaaqeen maalinta ay u muddeeyeen qabsoomidda doorashada Madaxtooyada oo loo qoondeeyey inay dalka ka dhacdo 29ka bisha March ee 2009. .
Ilo xogogaal ah oo ku dhowdhow kulankaas ayaa Jamhuuriya u xaqiijiyey xalay in Komishanka Doorashooyinku u bandhigeen wakiillada ka socday saddexda xisbi qaran jawdalka ay u qorsheeyeen qabashada doorashada Madaxweynaha oo ah 29 March 2009 iyo waqtiga hawsha diiwaangelinta codbixiyeyaashi si rasmi ah dalka ugu bilaabmi doonto.
Waxa kale oo ilahaasi tibaaxeen in masuuliyiinta axsaabta uga qaybgalay kulankaasi ay isula qaateen jadwalka Komishanku ku muddeeyey waqtiga qabsoomidda doorashada Madaxtooyada iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
Maanta ayaa la filayaa in Guddiga Doorashooyinku u gudbiyaan Madaxweyne Rayaale qorshaha jadwalka cayimadda doorashada Madaxtooyada iyo diiwaangelinta ee ay isku waafaqeen saddexda xisbi qaran, si uu muddo 15 maalmood gudahood ah ugu soo saaro wareegto lagu dhaqangelinayo, iyadoo markaa kadibna ay si rasmi ah dalka uga bilaabmi doonaan hawlaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
Geesta kale xogo u dhowdhow Komishanka Doorashooyinka, ayaa sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan lacag dhan 11 milyan doollarka Maraykanka oo ka mid ah dhaqaalaha deeqbixiyeyaashu u qoondeeyeen hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo 75% guud ahaan kharashka ku baxay doorashooyinka, halka 25%-ka soo hadhayna ay bixinayso xukuumadda Somaliland.
Jadwalka qabsoomidda doorashooyinka ee Komishanku shalay u bandhigeen saddexda xisbi qaran, waxa uu qayb ka yahay heshiiskii ay dhowaan lagu soo afjaray khilaafyadii ka taagnaa doorashada iyo muddo-dhaafka xilka Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
« Somaliland oo la wareegtay Gacan ku haynta Degmada Laasqoray, Puntland oo xaqiijisay Arintaasi. Kooxda Oldboys Oslo oo dhamaantood hambaliyo iyo bogaadin u diraaya meherka A-qadir A.Warsame & Fathia A. Muse. »